Madaxtooyadda Somalia oo iska fogeysay hadalkii C/raxmaan Guulwade – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ardaan Yare 22 January 2020
War-Saxaafadeed kasoo baxey Madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa la isaga fogeeyey hadal uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen (Guulwade) oo kamid ah Guddigii Madaxweyne Farmaajo u Magacaabey Wadahadallada Dowladda Federaalka iyo Soomaaliland.
Hoos Ka Akhriso War-Saxaafadeedka Madaxtooyadda Soomaaliya.
Waxaan aad uga xunnahay hadalka danjiraha, annaga oo adkeynayna inuu yahay mid isaga u gaar ah oo aan ka turjumeynin mowqifka Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Duqa Muqdisho oo la kulmay Safiirka Midowga Yurub ee Somalia+Sawirro